देशभर बदली, दिनभर कस्तो रहन्छ मौसम? « Kakharaa
देशभर बदली, दिनभर कस्तो रहन्छ मौसम?
३० भदौ, काठमाडौं । देशभरको मौसम मंगलबार सामान्यतया बदली भइ केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपाल भन्दा दक्षिण तर्फ रहेको मौसमविदले बताएका छन् ।